Horoscope Novambra 2019 | Ireo famantarana 12 sy zodiaka 12 rehetra - Horoscope Isam-Bolana Maimaim-Poana
Teny Nitaona Aingam-Panahy
Ny Horoscope Novambra Epic 2019
Faminaniana momba ny Horoscope sy Astrolojia maimaim-poana
Navoaka tamin'ny ny
*** Fanamarihana manokana ***
Tongasoa eto amin'ny top of horoscope sy fanandroana indrindra amin'ny volana amin'ny volana novambra 2019! Hamarino tsara fa tsoratadidy izahay mba hahafahanao miverina mandritra ny volana iray amin'ny 'fizahana' horoscope.
Horoscope Novambra 2019 - Topimaso
Misitrika amin'ny volana Novambra isika ary tsy azo antoka ny diantsika satria ny andro faharoa amin'ny Mercury Retrograde . Amin'ny vanim-potoanan'ny taona indray izao no tokony hijerentsika indroa - fanamarinana telo - izay rehetra apetrakay an-tsoratra. Tsy maintsy miadana isika ary mijanona minia mandinika ny hetsika rehetra. Ny hetsika retrograde an'ny planeta dia mamporisika antsika hisaintsaina ny lasa. Ny tsara indrindra dia ny fampiasana ity fotoana ity mba hahazoana fandaminana-ka ny fanaovana izany dia miantoka ny fahavonantsika handroso rehefa mandeha mivantana ny angovo. Tsy fotoana mety hanombohana tetikasa na fifandraisana vaovao.
Ny telo herinandro voalohany dia manaporofo mampatahotra rehefa sahirana isika mamantatra ny hafa na mamaly ny hevitsika. Raha manjaka ny fisalasalana, dia tsara kokoa ny mamela zavatra tsy voatonona mandra-pahatongan'ny angovo manohana ny fifandraisana mazava. 1 Novambra, mandalo Saturnaly Sextile Neptune Mampanantena antsika ezaka be karama raha mijanona tsy mitongilana ary miantehitra amin'ireo rafitra vinavina hamoronana harena.
Ny transiting Sun Trine Neptune ny fitaomana amin'ny 8 Novambra-9 Novambra lasa manao asa soa ny ankamaroan'ny olona. Hanitatra ny ahiahinay mihoatra ny tenanay izahay rehefa mametraka ny fifantohanay amin'ny filan'ny vondrom-piarahamonina lehibe kokoa. Ny hetsika mpilatsaka an-tsitrapo dia mety ankehitriny. Raha tsy manampy vondrona tsy mitady tombontsoa isika dia ho vonona hanohana ny namana sy ny fianakaviana sahirana.
10 Novambra, mandalo Sun Mercury mitambatra manosika ny saintsika anaty ho lasa overdrive. Ho tsapantsika fa ao amin'ny smorgasbord lehibe indrindra eran-tany isika miaraka amina menio feno fotoana mahafinaritra mamorona. Safidy be loatra no mandringa ary tsy misy safidy mihitsy. ny Volana feno any Taurus amin'ny faha-12 dia mitady ny fampiononana ao an-trano isika. Ireo ao amin'ny fifandraisana dia mandany fotoana amin'ny sandrin'ny fitiavana manan-danja iray hafa. Ho antsika mpitovo dia vanim-potoanan'ny fitiavan-tena sy fimamoana izany.
Chiron Retrograde dia mijanona mandra-pahatongan'ny 13 desambra, mametraka ny faniriana miakatra hanoherana ny ratra ara-pihetseham-po taloha. Rehefa mandalo ity andro ity amin'ity volana ity dia misy ny fahatsapana fa maika satria ny fahatsapana efa tsy noraharahantsika hatry ny ela dia manery ny lalan'ny fahatsiarovan-tenantsika. Raha mandà izay nampitebiteby antsika lalim-paka isika dia tsy misy afa-tsy fanahiana bebe kokoa. Ny faha-13-14, mandalo Mars Sextile Jupiter manaporofo fa mamokatra amin'ny asany; ny sasany amintsika dia mahazo fankasitrahana noho ny faharanitan-tsaintsika, fa ny sasany kosa mahazo kudos noho izy mahay sy mahay miasa.
aquarius lehilahy eo am-pandriana miaraka amin'ny vehivavy scorpio
Ny Mercury dia mandeha mivantana amin'ny faha-20, mamarana ny fitaomana mikorontana eto an-tany mandritra ny fotoana farany amin'ny taona 2019. Ho vonona be loatra izahay hamaha ireo olana mifandraika amin'ny fifandraisana izay napetrakay mandra-pahatongan'ity fotoana ity. Rehefa Miditra Sagittarius ny masoandro 23 Novambra, nitombo ny fahalalantsika ny tontolo. Ny sasany amintsika dia mihevitra ny hitety izao tontolo izao, fa ny sasany kosa mitady fotoana hianarana momba ny kolontsaina sy ny fomba fiainana hafa manakaiky ny trano.
Transiting Venus Conjunct Jupiter hahazo fampisondrotana mendrika mendrika ny tena isika rehetra. Na dia saro-kenatra aza dia fotoana itadiavana ny fiarahan'ny hafa. Ny olona dia tena manana ny maha izy azy azy ireo ary mila fifandraisana marina sy mangoraka. ny Volana Vaovao amin'ny Sagittarius amin'ny faha-26 dia mitady hanova ny fiainantsika ho amin'ny tsara kokoa isika. Ny sasany amintsika dia manafaka ny tenantsika amin'ny fifamatorana fifandraisana. Ny sasany mitodika any anaty mba hahita izay tadiaviny amin'ny fiainana.
28 Novambra, mandalo Venus Trine Uranus mahatsiaro mahatalanjona izahay rehefa mandany fotoana miaraka amin'ny ankohonana. 30 Novambra, miaraka amin'ny Mercury Sextile Saturnus fitaomana, maranitra ny saintsika ary feno nofinofy amin'ny ho avy lehibe ny lohantsika.
Horoscope Novambra 2019 - Famantarana Zodiaka 12 rehetra
Aleo atrehana; tsy tianao mihitsy ny angovo ateraky ny Mercury Retrograde. Aleonao madio sy fohy ary tsy sarotra ny mifampiresaka aminao. Saingy, na eo aza ny fahasosoran-tsainao, ny famindrana ny Saturn Sextile Neptune dia manome fanantenana anao ny amin'ny andro ho avy.
Manomboka amin'ny 8 Novambra-9 Novambra dia tsy manohana ireo drafitra fandefasana ireo angovo, fa izao no fotoana mety indrindra hampivoaranao ireo drafitra ho an'ny fiainanao nofinofisinao. 10 Novambra, ho liana te hahafanta-javatra ianao, ary mailaka ny sainao. Amin'ny faha-12, ny Full Moon ao Taurus dia miteraka faniriana handany vola be sy hividy entana tapakila lehibe. Hanana olana amin'ny fampijanonana ny tenanao tsy hamaky banky ianao raha miantsena a 'Hey, mendrika izany aho,' fihetsika.
Ny herin'ny Mars Sextile Jupiter mandalo amin'ny faha-13-14 dia mahatonga anao hifaninana kokoa noho ny mahazatra. Hamarino tsara fa tsy hihoatra ny ranomasina ianao, indrindra izao rehefa diso mamaky ny tanjonao ny hafa ary mahita ny toetranao mifaninana ho fialonana na mahery setra. Ny 20 novambra dia mihatsara ny endrika fifandraisana rehetra ary ny angovo dia mety amin'ny fivezivezena. Rehefa miditra amin'ny Sagittarius ny masoandro amin'ny 23, dia tsapanao fa tsy misy na inona na inona eto amin'izao tontolo izao tsy vitanao.
24-25 novambra, hanonitra ny olon-tianao ianao raha toa ka nifandramatra. Ny fifampiraharahana dia mandeha amin'ny fifanarahana na any am-piasana. Mandritra ny New Moon in Sagittarius amin'ny 26 Novambra, mitady hanenjika ny nofinao ianao, na inona na inona vidiny. Ny faha-28, ianao sy ny iray hafa manan-danja dia mankafy fotoana miaraka amin'ny fianakavianao. 30 Novambra dia hahita fialamboly vaovao ianao ary hametraka drafitra hianarana ny zavatra rehetra azonao atao momba izany.
Fanasitranana kristaly sy vato: Carnelian dia manome fisondrotana mahery vaika eo am-pampaherezana anao hanaraka ny nofinao.
Vakio rehetra momba ny Zodiac Aries famantarana
Tsindrio raha hianaranao rehetra Toetra, toetra maha-olona ary toetra mampiavaka an'i Aries
Mitady fitiavana? Tsindrio raha hamaky rehetra Fifanarahana Aries !
Makà fampahalalana lalina momba ny Man Aries !
Mamaha ny zava-miafina ny Aries Vehivavy !
Manana zanakavavy na zanakavavy Aries? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Aries Child !
Mitady faminaniana bebe kokoa ho an'ny Aries? Midira amin'ny isam-bolana Tarotscopes!
Amin'ny 1 Novambra, mampitodika ny sainao any anaty ny angovo satria mikorontana be ny any ivelany. Aleo avelanao hirehitra ny eritreritrao toy izay manandrana mandeha an-doha amin'ireo olona tsy mahazo izay tadiavinao holazaina. Ny aleonao mitoka-monina dia mijanona ao anatin'ny herinandro faharoa amin'ny volana satria mahatsapa fa mahazo aina ianao ao amin'ny faritaninao ary tsy misy olona hafa manelingelina anao.
Amin'ny 8 Novambra-9 Novambra, dia mandoa izany fotoana izany irery, indrindra raha ampiasainao hisaintsainana sy hijerena ny anjara toerana kelinao amin'ny lamba firakotra Universe. 10 Novambra, handany fotoana maimaim-poana ianao na handefasa-doha rehefa mamela ny fahatsiarovanao ho tonga mialoha ny fahatsiarovanao.
Ny volana feno dia miditra amin'ny famantaranao amin'ny faha-12, noho izany ny fanirianao ny tontolo manodidina sy ny fiadananan-java-mahaliana dia avo indrindra mandritra ny iray volana. Na ao an-trano eo ambony sezalà misy ondana lava ny vatana sy ny boky tianao indrindra na manandrana ny nahandro tsara indrindra ao amin'ny trano fisakafoanana tianao, dia hankafy ny fotoana mahafinaritra rehetra ianao. Ny transit Mars Sextile Jupiter amin'ny faha-13 sy 14 dia miantoka ny fahatsapana fa maranitra amin'ny famatsiam-bola sy ny fitantanana vola.
20 Novambra, toy ny manavesatra ny soroka ny lanjany. Tapitra ny fahasahiranana amin'ny serasera ary mitady hifandray amin'ny hafa indray mandeha ianao. Io dia ahafahanao manatanteraka ny filanao mikolokolo. Amin'ny 23rd, miaraka amin'ny Masoandro ao Sagittarius, ho faly ianao manao vazivazy sy miresaka amin'ny namanao akaiky indrindra. Handinika ny fitsangatsanganana any amin'ny toerana mbola tsy nandalovanao ianao. Ny faha-24-25 dia ho lasa mpanamboatra lalao ianao, mametraka ny namanao roa amin'ny daty na mpampihavana iray izay manampy ny mpivady hamaha ady.
Amin'ny faha-26, mandritra ny volana vaovao, manonofinofy momba ny hoavinao ianao. Ny faha-28, faly ianao mampindrana tanana ny mpianakavy-manome fotoana fanampiny anao hiarahana amin'ny fialantsasatra. Amin'ny faha-30, ny faniriana hanandrana zava-baovao hanatsarana fifandraisana iray no nandinihanao ny lafiny andrana nataonao. Raha mpitovo ianao dia handany fotoana amin'ny olona iray izay tia anao.
Fanasitranana kristaly sy vato: Ny astrophyllite dia manampy anao amin'ny famaritana ny iraka ataon'ny fanahinao sy ny fahitana ny feonao masina.
Manana zanaka vavy na zanakavavy Taurus? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Ankizy Taurus !
Mitady faminaniana bebe kokoa momba an'i Taurus? Midira amin'ny isam-bolana Tarotscopes!
1 Novambra, fa tsy tokony hanaraka fomba tsy misy na inona na inona, dia handingana ny tenanao ianao mandritra ny herinandro vitsivitsy. Aleonao mandray zavatra miadana toy izay mamarana zavatra amin'ny fianjerana sy mandoro scenario amin'ny fiarahana. Na dia te handefa tetikasa aza ianao dia milaza aminao ny instincanao fa tsy izao no fotoana hanaovana izany.
Ny faha-8-9, mandika ny Sun Trine Neptune dia mieritreritra ny hanova ny fitafianao ianao. Ny fahombiazana dia teo an-tampon'ny sainao, noho izany dia ho tsapanao fa zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny fitafy ny ampahany. Ny fahaizanao voajanahary dia ahitana ny fahaizana mamaky olon-kafa; manompo anao tsara rehefa mikorontana ny serasera. Amin'ny faha-10 dia tsy tianao ny mihoatra ny miresaka mandritra ny ora maro raha misy olona te hihaino fotsiny.
Ny faha-12, ny Full Moon in Taurus dia manampy anao hifantoka amin'ny tenanao sy ny tany. Mahatonga anao ho kamo ny angovo, saingy tsy zavatra ratsy toy izany ny miadana tsindraindray; vanim-potoana izay hisian'ny 'fifandrifian-javatra' kely. Amin'ny faha-13-14, ho hitanao ny lazanao mialoha anao. Ny hatsaram-panahy nitarinao ny hafa taloha dia niely tamin'ny alàlan'ny vavanao ary nahazo teboka brownie tamin'ireo izay manana fahefana.
20 Novambra, faly ianao rehefa lany ny olan'ny fifandraisana. Ankehitriny ianao dia afaka mahazo ny fanentanana ara-tsaina sy ny saina tadiavinao tsy misy fikorontanana rehetra. Amin'ny faha-23, rehefa miditra amin'ny Sagittarius ny Masoandro dia hahatsapa ho tsy miraharaha ianao-maniry fatratra traikefa vaovao sy manaitaitra ary handositra ny fahazarana isan'andro.
Ny faha-24-25 dia tadiavinao ny manodidina ny hatsaranao, na ny olony na ny zavatra. Volana vaovao iray any Sagittarius andro iray taty aoriana dia miteraka faniriana hanandrana zavatra mbola tsy nandramanao hatrizay. Amin'ny faha-28, ny toetranao miboiboika dia mahatonga ny fifandraisan'ny mpianakavy hahafinaritra sy tsy hadino. Ny namana vaovao dia mankasitraka ny tombontsoanao tsy manam-petra sy isan-karazany. 30 Novambra, na dia iharan'ny tsindry aza ianao dia mbola mamirapiratra ihany noho ny tanjaky ny toetranao.
Fanasitranana kristaly sy vato: Black Obsidian dia manampy anao hiaro sy hiaro ny aurao amin'ny angovo ratsy.
Mitady faminaniana bebe kokoa momba an'i Gemini? Midira amin'ny isam-bolana Tarotscopes!
1 Novambra ianao dia hanomboka ny volana mijery anaty, Cancer. Any ianao dia afaka mizaha ny fahitana, ny nofinao ary ny fanantenana amin'ny filaminana tanteraka. Ny dia anatiny dia manomboka amin'ny fisaintsainana, fanaovana diary, na fisaintsainana mangina fotsiny. Ny tontolo ivelany sy ny fiaraha-monina dia tsy manintona fotsiny izao.
8th-9 Novambra, ny fandalovana Sun Trine Neptune dia miteraka fahalianana amin'ny lohahevitra tsy mahazatra. Izay hitan'ny hafa fa hafahafa dia hitanao fa mahaliana. Ny 10 Novambra, ny transit Sun Conjunct Mercury dia vao mainka mampitombo ny fahalianana efa mihalehibe amin'ny lohahevitra ambaratonga. Ny Full Moon in Taurus amin'ny faha-12 dia maniry ny hifandray bebe kokoa amin'ny Mother Earth ianao. Ho tsapanao koa fa matanjaka sy salama saina kokoa ianao.
Amin'ny 13-14 Novambra, maniry mafy ny hifaneraserana amin'ireo olona mitovy hevitra aminao ianao. Ny toetra maha-olona anao dia manamora ny fanananao namana sy fihazonana izany. Raha mahatsiaro tena ho tsy matoky tena ianao na saro-kenatra dia mamporisika anao hiala amin'ny fiafenana ny namanao vitsivitsy. Amin'ny faha-20 dia mora kokoa aminao ny milaza izay tianao holazaina, indrindra rehefa mifampiresaka amin'ny olon-tiana.
Rehefa miditra amin'ny Sagittarius ny masoandro amin'ny 23, dia fotoana tena mety amin'ny fampiasam-bola ara-bola, fanaovana drafitra fitsangatsanganana, na fividianana tapakila be ho an'ny trano. Ny faha-24-25, ny masonao amin'ny zavatra tsara rehetra sy ny filana ny fahafaham-po ny hetahetan'ny zanakao anaty famoronana dia miteraka faniriana handoko indray ny toerana masinao.
Ny New Moon in Sagittarius amin'ny faha-26 dia mampanantena anao ho ody vintana amin'ny asa rehetra. Izay kendrenao izao dia azo tanterahina mandritra ny fotoana fohy. Ny faha-28, mitady hanatsara ny fitaovana elektronika ianao ho an'ny gizmos farany. 30 Novambra, ny fahatsiarovanao sy ny fahaizanao mifantoka dia mahatonga ny famakiana ny andro fiasana ho tsio-drivotra.
Fanasitranana kristaly sy vato: Ny bauxite dia manampy anao hahita zavatra mazava kokoa eo am-panafahana ireo fahatsapana poizina.
Vakio rehetra momba ny famantarana ny zodiac homamiadana
Tsindrio raha hianaranao rehetra Toetra homamiadana, toetranao ary toetrany !
Mitady fitiavana? Tsindrio raha hamaky rehetra Mifanaraka amin'ny homamiadana !
Makà fampahalalana lalina momba ny Lehilahy homamiadana !
Mamaha ny zava-miafina ny Vehivavy homamiadana !
Manana zanakavavy sa zanakavavy iray? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Ankizy homamiadana !
Mitady faminaniana bebe kokoa momba ny homamiadana? Midira amin'ny isam-bolana Tarotscopes!
Hanara-maso akaiky ny olona ao amin'ny boriborinao anaty ianao amin'ny 1 Novambra. Ny fifanolanana eo amin'ny samy mpinamana dia mitarika amin'ny olona manandrana mitaona anao. Tsara kokoa raha miala amin'ny zavatra ianao. Raha vao milamina ny olana dia tsy misy manilika anao amin'ny filalaovana tianao.
Ny Sun Trine Neptune mandalo amin'ny 8th-9th fitaomana dia mihamafy ny fifankatiavanareo. Ny halalin'ny fahatsapanao ny tsirairay dia mihamafy hatrany amin'ny fifandraisana ara-panahy iraisana. Raha mpitovo ianao dia hitady olona manana fo lehibe manana fomba fijery mitovy amin'ny fiainana. Ny Volana Feno ao Taurus amin'ny 12 Novambra, na dia eo aza ny toetranao matanjaka, tianao ve ny toy ny saka kely mila fotoana misimisy?
Ny faha-13-14 Novambra dia manatsara ny fahasahianao. Mampifanaraka ny herim-ponao amin'ny fomba fijery tsara ianao rehefa miantsoroka andraikitra izay mitaky anao hanaiky laza ambony. Ny charisma anao dia manamora ny fanodikodinana ny mpihaino rehetra adiresinao. Amin'ny faha-20, avelanao hidina kely ny mpiambina anao rehefa mitantana antontan-taratasy elektronika sy taratasy ianao. Miala ny fitaoman'i Mercury Retrograde, mamela anao tsy hanahy firy amin'ny snafus mahamenatra. Ny faha-23, miditra amin'ny Sagittarius ny Masoandro, ianao dia hanandrana miaina fiainana amin'ny fisotroan-toaka, fandihizana ary fivoriambe ara-tsosialy hafa izay manintona anao izao.
Ny 24-25 novambra, ny famindrana an'i Venus Conjunct Jupiter dia miteraka vanim-potoana hahombiazan'ny zava-drehetra ezahanao. Ho tsapanao fa voatahy manokana ianao noho ireo olona mahafinaritra amin'ny fiainanao. Miaraka amin'ny New Moon in Sagittarius amin'ny 26th, misy ny fanentanana hanitatra ny fahalalanao ary hihaika ny tenanao. Ny faha-28, misy fahatsapana ny fahaiza-mamorona tonga eo aminao rehefa manatsara ny sakafo karakarainao na ny tontolo iainana ao an-trano ianao. Ny faha-30 dia fotoana tokony hikororohana ary hametrahana drafitra orinasa.
Fanasitranana kristaly sy vato: Ny Datolite dia manatsara ny fikolokoloana kognita rehefa manamboatra anao amin'ny fanomezana naterakao.
mifanentana amin'ny lahy sy vavy ny pisces vavy
Vakio rehetra momba ny Leo Zodiac Sign
Tsindrio raha hianaranao rehetra Ny toetra Leo, ny toetrany ary ny toetrany .
Mitady fitiavana? Tsindrio raha hamaky rehetra Fifanarahana Leo !
Makà fampahalalana lalina momba ny Leo Man !
Mamaha ny zava-miafina ny Leo Vehivavy !
Manana zanaka vavy na zanaka lahy? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Leo Child !
Mitady faminaniana bebe kokoa momba an'i Leo? Midira amin'ny isam-bolana Tarotscopes!
1 Novambra, ny fitaterana Saturn Sextile Neptune dia niteraka faniriana hanana fifandraisana ara-panahy lalindalina kokoa. Ny fiainana an-tsaina bebe kokoa, ny fisaintsainana ary ny vavaka no eo an-tampon'ny lisitry ny zavatra tokony hatao. Hanangana drafitra ho an'ny fianarana ara-panahy ianao.
Amin'ny 8 Novambra-9 Novambra, ny fanirianao hanampy ny hafa dia manolo-tanana an'ireo olona ao amin'ny fianakavianao na mpiara-monina aminao. Ankafizo ny buzz voajanahary amin'ny fampisehoana amin'ny hafa ny lafiny mangoraka anao. 10 Novambra, tsy fotoana izao handaminana ny antontan-taratasy tsy mitsaha-mitombo eo amin'ny latabatrao any am-piasana na any amin'ny birao an-trano. Mety hahita ny anjaranao amin'ny snags mahasosotra ianao.
Ny Full Moon in Taurus amin'ny faha-12 dia manamafy ny filanao hanamarina indroa sy hanamarina intelo ny fijoroanao amin'ny vola. Ny 13-14 Novambra dia andro lehibe iatrehana ny raharaham-barotra raha toa ianao ka manao fifanarahana fifanarahana amin'ny volon-nify. Rehefa mandeha mivantana ny faha-20 ny Mercury dia afaka miaina kely mora kokoa ianao. Rehefa miditra amin'ny Sagittarius ny masoandro amin'ny 23, dia sarotra ny manaikitra ny lelanao rehefa misy olona manandrana ny faharetanao.
Amin'ny faha-24-25 dia hijinja ny valin'ny fieritreretanao ianao. Amin'ny faha-26, ianao dia ho franker miaraka amin'ny olon-tianao na namana noho ny mahazatra-dia manampy ny korontana misy eo amin'ny fifandraisana. Ny faha-28 hialanao ivelan'ny faritra mampionona anao rehefa mandray ny fivorian'ny ankohonanao ianao mandritra ny fialantsasatra-dia lasa tsara lavitra noho ny antenainao ny andro. Ny faha-30 ny fanirianao hifanerasera amin'ny olona mitovy saina aminao dia manatrika fivoriana ara-tsosialy na miditra amin'ny klioba ianao.
Fanasitranana kristaly sy vato: Fulgurite dia manampy anao haneho ireo zavatra tadiavinao indrindra amin'ny fiainanao.
Vakio rehetra momba ny Famantarana Zodiac Virgo
Tsindrio raha hianaranao rehetra Toetoetra, toetra maha-olona ary toetra mampiavaka azy !
Mitady fitiavana? Tsindrio raha hamaky rehetra Fifanarahana Virgo !
Makà fampahalalana lalina momba ny Virgo Man !
Mamaha ny zava-miafina ny Vehivavy Virgo !
Manana zanakavavy na zanaka virijina ve? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Ankizy Virgo !
Mitady faminaniana bebe kokoa momba ny Virgo? Midira amin'ny isam-bolana Tarotscopes!
1 Novambra, misintona olona iray hiala amin'ny endrika maizina ianao. 8-9 novambra, hanadihady fomba vaovao ianao hanatratrarana ny tanjonao amin'ny fahombiazana avo indrindra. Raha efa nahavita ny tanjonao ianao dia hampifantoka ny sainao amin'ny fanampiana ny hafa hanao toy izany koa. 10 Novambra, ny hafahafa amin'ny chattiness anao dia manomboka be loatra satria ny sainao dia mihazakazaka miaraka amin'ny hevitra manaitaitra.
Ny Volana Feno ao Taurus amin'ny faha-12, ny andro dia mitia ny fitiavanao tena ary manimba ny tenanao: Andro iray any amin'ny spa no tsy olana. Raha mividy ianao, dia ho hitanao ny zavatra tsara sy avo lenta. 13-14 novambra, raha mijery ny mason'ny avo kokoa ianao any am-piasana dia mahomby amin'ny fihodinanao loha vitsivitsy. Rehefa mandeha mivantana amin'ny faha-20 ny Mercury dia ho tsapanao ny fiovana mahery vaika ary hampitomboanao avo roa heny ny fotoana ahafahana mifanerasera sy mifampiresaka.
Amin'ny 23, miaraka amin'ny Masoandro ao Sagittarius, hiady amin'ny fitazonana ny fandanjalanjana ianao ary handray zavatra amin'ny antonony. Raha manatrika fankalazana iray ianao dia aza manadino loatra. Amin'ny 24- 25 Novambra ho avy izao dia hahatsapa fiadanam-po ianao rehefa miomana amin'ny asa be atao herinandro ho avy. Ny faha-28, handany ny faran'ny herinandro any an-trano ianao. Raha tokony hanavao ianao dia hanamboatra sy handamina ny fanaka ao an-trano indray ianao mba hanomezana fahatsapana hafa ny tranonao. 30 Novambra, mihombo ny fahaliananao amin'ny tetiarana.
Fanasitranana kristaly sy vato: Ny Inesite dia manampy amin'ny fanamafisana ny fifandraisana am-pitiavana sy ny fanatsarana ny filaminana ara-pihetseham-po.
Mitady faminaniana bebe kokoa momba an'i Libra? Midira amin'ny isam-bolana Tarotscopes!
Amin'ny voalohan'ny volana novambra, ho hitanao ny hampitombo ny fahatsiarovan-tenanao sy hampihenjana ny fahaizanao ara-tsaina amin'ny alàlan'ny fisaintsainana, sary an-tsaina ary fampiharana ivelan'ny hery. Miharihary manokana ny nofinao. Amin'ny faha-8-9, mamaly soa ny fanoloran-tenanao sy ny fifehezan-tenanao rehefa miasa ianao amin'ny famolavolana paikady hanaovana ny fanirianao fatratra. Amin'ny faha 10, manontany tena ianao ary mampiseho fahalianana marina amin'ny tantara zarain'ny olon-kafa.
Rehefa any Taurus ny volana feno amin'ny faha-12 dia mihombo avo folo heny ny hamafisinao; mahatonga ny vady tsy haninona aminao ny mamaky eo aminao rehefa misaina ianao. 13- 14 Novambra, ho modely ho an'ny hafa ianao satria tsy avelanao hitombo eo ambanin'ny tongotrao ny ahitra rehefa misy ny asa tokony hatao.
Amin'ny faha-23, mila voky ny fahaliananao tsy manam-petra-na mamaky ny iray amin'ireo tantara farany be mpividy indrindra ianao na misoratra anarana amin'ny kilasin'ny olon-dehibe; hanitatra ny faravodilanitra ianao. Amin'ny 24th-25th, raha mpitovo ianao, ny hafa dia mahita anao manintona sy be fitiavana. Raha ao anaty fifandraisana ianao sy ny vadinao dia misakafo am-pitiavana ao an-trano, feno voninkazo sy labozia.
Amin'ny 26, ianao dia hizaha ny zavatra inoanao amin'ny alàlan'ny adihevitra filozofika lava sy maharitra amin'ny hafa. 28 Novambra, hampiantrano fiaraha-miangona kely ianao ho an'ny fianakavianao-raha misy ny fifanolanana eo amin'ireo olona ao amin'ny fianakavianao dia hilalao mpiambina ianao. Ny faha-30, milalao kilalao ati-doha vitsivitsy ianao mba hanamafisana ny fahaizanao misaina.
Fanasitranana kristaly sy vato: Covellite dia manampy anao hanaraka ny sainao ambony sy ny tontolo ho an'ny fitarihana.
Mitady faminaniana bebe kokoa momba an'i Scorpio? Midira amin'ny isam-bolana Tarotscopes!
Amin'ny 1 Novambra, mitady hahita olona vaovao ianao ary hanandrana zava-baovao amin'ity volana ity-tsy ianao no avelanao ho mailo ny raharaha. Mihaona amin'ny olona ianao amin'ny alàlan'ny vondrona an-tserasera na fihaonana eo an-toerana. Raha tokan-tena ianao, dia hihaona amin'ny olona liana iray izay tena tia biby. 8th-9 Novambra, ianao dia hanandrana ny tananao amin'ny fialamboly vaovao toy ny fanaovana sary. Amin'ny faha-10, hanaiky ny tsy mahazatra sy tsy mahazatra ianao - fotoana mety indrindra izao hijerena ny mpamaky karatra na psychic hahalalanao ny hoavinao.
Mandritra ny Volana Feno ao Taurus amin'ny 12 Novambra, mihamafy ny fanirianao hanana zavatra tsara manodidina anao. Miaraka amin'ny fitaoman'ny fandikana an'i Mars Sextile Jupiter amin'ny faha-13-14, nisy olona iray tany am-piasana nilaza zavatra tsapanao fa mandrahona ny lazanao. Ny famahana ny olana amin'ny fifanatrehana ny olona mifanatrika dia manampy amin'ny famongorana ny olana.
Amin'ny faha-20, mandeha mivantana ny Mercury, noho izany ianao sy ny vadinao dia mamarana ny adihevitra mitohy. 23 Novambra, rehefa miditra amin'ny sonia anao ny Masoandro dia tsy hanana toe-tsaina matoky ianao. Hihaona amin'ny toe-javatra 'mahita ianao mino' izay tsy hanaovanao hetsika raha tsy mahazo antoka ianao. Mandalo ny Jupiter mpiray vava Venus amin'ny 24-25 novambra, mitady ianao ary mahatsapa tena tsara indrindra. Voamariky ny olona fa manaporofo fa manintona ny fahatokisanao.
Amin'ny faha-26, ny herin'ny volana vaovao dia mahatonga anao hanontany ny dikan'ny fiainana. Ny 28 Novambra dia andro handanianao fampatsiahivana amin'ireo olon-tianao. Ny 30 Novambra, handinika kilasy roa na roa ianao mba hahafahanao mandroso amin'ny asanao.
Fanasitranana kristaly sy vato: Picasso Stone dia manampy anao hiditra amin'ny zavakanto voajanahary anao sy ny fanirianao hamorona.
Mitady faminaniana misimisy kokoa momba an'i Sagittarius? Midira amin'ny isam-bolana Tarotscopes!
Aries lehilahy gemini vehivavy tia fampifanarahana
Amin'ny 1 Novambra, te-hahatratra ny tanjonao ambony indrindra ianao any am-piasana. Saingy ny fikajiana ny vavoninao dia milaza aminao fa tsy tokony hihetsika izao. Mandritra ny telo herinandro ho avy dia jerenao ny hevitrao sy ny dingana tokony hatao mba hahatratrarana ny tanjonao. Amin'ny 8th-9th, dia handany fotoana kalitao fanampiny miaraka amin'ny biby fiompinao ianao. Raha tsy manana biby fiompy ianao dia handinika ny fitsidihana toeram-pialofana biby eo an-toerana mba hahitana namana biby vaovao. 10 Novambra, maranitra ny sainao, ka izay olana miseho any am-piasana na any an-trano dia misy vahaolana mora hita.
The Full Moon in Taurus 12 Novambra dia maniry mafy ny hiala sasatra ianao ao an-trano manodidina anao amin'ny zavatra izay mitondra anao fampiononana ara-pihetseham-po mamelombelona ny fanahinao. Ny faha-13-14, mitohy ny fihenjanana eo am-piasana noho ny fifandonana misy amin'ny mpiara-miasa. Rehefa mandeha mivantana amin'ny faha-20 ny Mercury dia hahita vahaolana amin'ny olana ianao.
Ny fahatsapana mora azo avy amin'ny namana dia tsapanao fa ambonin'izao tontolo izao. Amin'ny 23, miaraka amin'ny Masoandro ao Sagittarius, dia hino mafy ianao amin'ny fomba fijerinao fa mety tsy hijanona ho tanjona ianao. 24th-25 novambra dia hanana vintana ianao amin'ny asa rehetra ataonao.
28 Novambra, mpikambana ao amin'ny fianakaviana izay mbola tsy nahita anao nandritra ny fotoana fohy niditra teo amin'ny fiainanao-dia fotoan'ny fahasambarana lehibe. Manomboka izao ny finamanana maharitra. 30 Novambra, hamaha ny fifanolanana maharitra nifanaovanao tamin'ny iray hafa ianao.
Fanasitranana kristaly sy vato: Menalite dia vato fotsy tsara ampifandraisina amin'ny angovo eto an-tany ary miorim-paka.
Vakio rehetra momba ny Capricorn Zodiac Sign
Tsindrio raha hianaranao rehetra Toetra Capricorn, toetrany, toetra mampiavaka azy !
Mitady fitiavana? Tsindrio raha hamaky rehetra Fifanarahana Capricorn !
Makà fampahalalana lalina momba ny Lehilahy Capricorn !
Mamaha ny zava-miafina ny Vehivavy Capricorn !
Manana zanakavavy na zanakavavy Capricorn? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Ankizy Capricorn !
Mitady faminaniana bebe kokoa momba an'i Capricorn? Midira amin'ny isam-bolana Tarotscopes!
1 Novambra dia sarotra aminao ny mamaky ny hevitrao rehefa miresaka amin'ny hafa. Saingy tsy misy fambara miampita amin'ny fahaizanao ara-tsaina. Izay sarotra aminao ny mifampiresaka amin'ny mahazatra dia midika fa manampy anao hivezivezy amin'ny toe-javatra sarotra ny fampiasa anao. Amin'ny faha-8-9, ny fandikana ny Sun Trine Neptune dia nahatsapa ho tsy dia mahatakatra firy amin'ny fikorontanan'ny fikorontanana manodidina anao irery ianao no hany vahaolana.
12 Novambra, miaraka amin'ny Full Moon in Taurus, ny zava-drehetra amin'ny fiainana dia toa mahafinaritra tokoa, na ny sakafo tianao indrindra aza dia matsiro kokoa. 13- 14 novambra, nitombo ny angovo anananao. Mitandrema raha manapa-kevitra ny hanao prank olona ianao sao tsy mitovy amin'ny vazivazy hafahafa anananao.
Ny faha-20 Novambra, rivotra mifaly sambatra no manjaka anio. Fotoana mety amin'ny famoriam-bahoaka. Mihamafy ny fangorahanao ny hafa. Miaraka amin'ny Masoandro ao Sagittarius amin'ny 23, mitombo ny vintanao. Ny faniriana hikaikitra be amin'ny zava-drehetra atolotry ny fiainana dia mitroatra ao anatiny.
Ny faha-24-25, ny fahaizanao tsy mety voky no nitadiavanao traikefa vaovao ahafahanao manitatra ny fahalalanao na miaina kolontsaina vaovao. Miaraka amin'ny New Moon in Sagittarius amin'ny 26th, ianao dia hanapa-kevitra ny hanao fanovana lehibe sy lehibe eo amin'ny fiainanao.
28 Novambra, ho be atao ianao toy ny tantely miomana amin'ny raharaham-pianakaviana na fivorian'ny namanao akaiky indrindra. Fotoana itomboan'ny lazanao ary ny hafa mahita anao manintona ara-tsaina. Mihalehibe ny fahatsiarovanao amin'ny 30, fa ny angovo kosa mahatonga anao hitandrina amin'ny zavatra zarainao amin'ny hafa.
Fanasitranana kristaly sy vato: Tremolite dia vato maitso maivana mampiroborobo ny fanentanana ara-tsaina sy ny famoronana.
Vakio rehetra momba ny famantarana Zodiac Aquarius
Tsindrio raha hianaranao rehetra Ny toetran'i Aquarius, ny toetranao ary ny toetrany !
Mitady fitiavana? Tsindrio raha hamaky rehetra Fifanarahana Aquarius !
Makà fampahalalana lalina momba ny Aquarius Lehilahy !
Mamaha ny zava-miafina ny Vehivavy Aquarius !
Manana zanakavavy na zanaka lahy Aquarius? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Zanaka Aquarius !
Mitady faminaniana bebe kokoa momba an'i Aquarius? Midira amin'ny isam-bolana Tarotscopes!
1 Novambra dia hahatsapa ho voaro ianao rehefa manintona. Hampiasa ny telo herinandro voalohany amin'ny volana ianao ho fotoana fandinihana. Ny fitetezam-paritra, ny fisaintsainana, ny nofinofy ary ny sary an-tsary dia fomba fanao mety - fomba rehetra manampy anao handamina ny fomba handrosoana rehefa mandeha mivantana amin'ny faha-20 ny Mercury.
Ny faha-8-9 dia ahitanao tarehin-javatra sy fifandraisana tsy misy fanalam-baraka na fandavana manakana azy io. Mihalehibe ny fahatsiarovan-tena, saingy mbola aleonao mitoka-monina noho ny fiarahamonina. 10 Novambra, ny fitaomana ny Sun Conjunct Mercury izay nandalo ary ny famerenan'ny planeta dia nanisy fanamafisana indroa ny famahana ny ratram-po taloha. The Full Moon in Taurus amin'ny 12 Novambra, ianao sy ny olon-tianao dia mizara fotoana mampihetsi-po.
Ny faha-13-14 novambra, misy ny fahafaha-miasa manatrika ny fandinihanao anao - eny fa na dia ny ezaka mafy indrindra eo amin'izy ireo aza dia miteraka vokatra tsara. Ny Masoandro ao Sagittarius dia manome lanja anao amin'ny fahatokisanao tena - mahatonga anao hahatsapa ho azo antoka kokoa ny fizarana fihetsem-po sy ny fiarahana. Ny faha-24-25, ny planeta nanatevin-daharana ireo Venus sy Jupiter mpahazo tombontsoa lehibe dia mampanantena fientanam-po sy fahasambarana betsaka.
Amin'ny faha-26, mitohy ny fijerinao ny fiandrandranao rehefa mieritreritra ny ho avy rehetra omena anao ianao. Ny 28 Novambra, hanehoanao ny fankasitrahanao ireo tianao. 30 Novambra, raha manam-pahefana ianao, ny hafa manaja sy manaraka ny fitarihanao. Mijanona ho madio ny sainao, noho izany mora ny mifantoka amin'ny fanatratrarana tanjona.
Fanasitranana kristaly sy vato: Sardonyx dia manampy anao hitazona fomba fijery tsy miovaova ary hifantoka amin'ny fahasalamanao.
Vakio rehetra momba ny Famantarana Zodiac Pisces
Tsindrio raha hianaranao rehetra Toetra Pisces, toetranao ary toetra mampiavaka azy !
Mitady fitiavana? Tsindrio raha hamaky rehetra Fifanarahana Pisces !
Makà fampahalalana lalina momba ny Pisces Lehilahy !
Mamaha ny zava-miafina ny Vehivavy Pisces !
Manana zanakavavy sa zanakavavy Pisces? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Pisces Ankizy !
Mitady faminaniana bebe kokoa momba an'i Pisces? Midira amin'ny isam-bolana Tarotscopes!
Ity fidirana ity dia navoaka tao Faminaniana momba ny Horoscope sy Astrolojia maimaim-poana . Bookmark ny permalink . Tarotscopes ho an'ny Novambra 2019 Tarotscopes ho an'ny Desambra 2019
lehilahy virjina ary miakatra vehivavy eo am-pandriana
tabilao dikan'ny biby taom-baovao sinoa
inona no dikan'ny taonan'ny tigra
taurus lehilahy sy vehivavy capricorn eo am-pandriana